आज धान दिवस, नेपालमा धानकाे उत्पादन दाेब्बर बनाइने – nayakalam
२०७६, असार १५ आइतबार | नयाँ कलम
काठमाडौँ- सरकारले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको मुख्य बाली धानको उत्पादन बढाउनैपर्ने हुन्छ । धान उत्पादन बढाउन ल्याएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गए उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने छ ।
सरकार नेपालीलाई मसिनो र वासनादार चामल खाने बानी परेको हुनाले आयात गर्नु परेको भन्छ तर मेरो प्रश्न छ– नेपालमा उत्पादन हुने मोटा चामल कहाँ जान्छ त ? तथ्याङ्कमा ढाँटिरहेको छ या चामलको नाममा अरू कुनै वस्तु निर्यात भइरहेको छ । यसको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ । सरकार पुग्ने गरी उत्पादन हुन्छ भन्छ तर आयात पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुन्छ भने उत्पादन भएको वस्तु जान्छ कहाँ ? त्यो खोज्नु प¥यो ।गोरखापत्रबाट